Soo Saaraha iyo Warshada ugu WacanIpanda
Qaybta mishiinada waxay qabataa naqshadaynta isku dhafan ee qaabaynta, waxayna ka dhigtaa mashiinka mid macquul ah.Hagaajinta dhererku waxay qabataa dhaqdhaqaaqa dhaqdhaqaaqa;way ku habboon tahay in la beddelo walxaha.Naqshadeynta madaxa gooyaha gaarka ah, samee gooyn-duubista filimka si sax ah oo la isku halleyn karo.
Mashiinkaani wuxuu qaataa tignoolajiyada horumarsan ee caalamiga ah;Dabool calaamadda goobada ee dhalada xayawaanka.Ka dibna kululaynta kululaynta si loo hagaajiyo booska dhalada loo qoondeeyey. Qaab dhismeedka mashiinkani waa mid cufan, oo ku habboon khadka wax soo saarka ee jihada kala duwan iyo dhererka kala duwan.
Dhererka dhalooyinka ku habboon 20-125mm
Dhererka dhalada 15-320mm
Cabbirka summada (L*H) 50-330-40-150 mm
Qaab dhalada ku habboon wareegsan, afar gees ah, elliptical, leydi ah
Heerka calaamadaynta ≥99.9%
Dhererka summada 25-200mm
Calaamadee Dhumucda 0.035-0.08mm
Ku calaamadee dhexroorka xudunta u ah warqadda 3-10mm
Miisaanka saafiga ah 500KG
Liiska Qaybaha Hadhaaga
1. Dhammaan jidhka ugu muhiimsan ee birta aan la xidhin: Badbaadada hawlwadeenka.Mashiinka oo dhan waa mid aan biyuhu ilaalinayn oo ka-hortagga daxalka.
2. Saqafka mindida la hagaajin karo: Mindi nooc wareeg ah oo naqshad gaar ah, laba-daab leh muddo dheer.
3. Hal meelaynta tiirka xudunta u ah: u gudbi summada si deggan
4. Hagaajinta Meesha dhalada: dhaladu kama dhammaan doonto qaade oo si deggan u dhaqaaqi mayso
5. Ku caday meelaynta summada: Sax badan.
6. Calaamadaynta qaab-dhismeedka sawir-qaadista: empennage gaar ah oo lagu daray photocell, kor u qaad saxnaanta goynta.
7. Hal midab HMI screen
8. Waxaa lagu rakibay Bar Qaab-dhismeedka quudinta
1. Khadka oo dhan si toos ah ayaa loo hagaajin karaa wax soo saarka si toos ah ama gacanta: Xakamaynta xawaaraha otomaatiga ah: gobolka si toos ah mashiinkayaga waxaa lagu hagaajin karaa iyadoo la raacayo habka hore ee xawaaraha wax soo saarka si toos ah, oo leh dhalooyin indho sixir ah, si buuxda oo toos ah nidaamka raadraaca oo leh shaqo ku habboon oo degdeg ah Automation Control Manual: waxay noqon kartaa iyadoo loo eegayo shuruudaha xawaaraha wax soo saarka si loo xakameeyo jadwalka bixinta, hawlgalka xawaaraha si buuxda aadanaha.
2. Mashiinka oo dhan ayaa si toos ah u ogaanaya, la shaqeeya mashiinka-mashiinka ee shaashadda Shiinaha iyo digniinta nalka trichromatic, waqti ku ogow sababaha cilladda qalabka
3. gaarsiinta mishiinka ee set dhamaystiran oo ka mid ah hay'adaha gudbinta synchronous u baahan tahay si ay u hagaajiyaan buro, aad si fudud u hagaajin kartaa xawaaraha ordaya mashiinka.Mashiinku wuxuu si otomaatig ah u ogaanayaa hagaajinta xaaladda degdegga ah.
4. Meesha kali ah ee hagaha nooca xarunta: aad u degan si loo hago sumadda.
5. Madaxa gooyo la hagaajin karo: gooynta cyclotron asalka ah, daab labanlaab ah, nolol dheer;
6. Nooca dhalada lagu dabaqi karo: labajibbaaran, guri dabaq ah, nooca koobka iyo dhalooyinka nooca qalooca aan joogto ahayn.
Summada-xakamaynta shelf-indhaha korantada:isku darka gaarka ah ee dabada iyo isha korantada si loo hagaajiyo saxnaanta goynta walxaha xuubka.
Madaxa gooya la hagaajin karo:
Goynta cyclotron aan fiicneyn, gooyn laba geesood ah oo leh nolol adeeg dheer.
Tiirka hagaha xaruunta dhejiska ah ee keliga ah: aad u xasiloon gudbinta summada.
Hore: Mashiinka Calaamadaynta Dhalo Wareega Toos ah
Xiga: Mishiinka Calaamadaynta Dusha sare ee Toos ah
mashiinka buuxinta saliidda cuntada Mashiinka Buuxinta Tuubbada Bistoon Mishiinka buuxinta dareeraha tooska ah Mashiinka Buuxinta Saliida mashiinka buuxinta malab Mashiinka buuxinta malabka oo toos ah